Namuhla, izitolo zezimbali ziyasijabulisa ngokuhlobisa okukhulu kwemibala ehlukahlukene, kuhlanganise nama-orchid. Phakathi kwazo zonke izinhlobo ezihlukahlukene kukhona i-phalaenopsis engathobekile - ama-orchid ahlukahlukene, okubizwa nangokuthi imbali yamaMalaysia. Lezi zinhlobo eziqhakazayo eziqhakazayo, isikhathi esithile siqhakaza ezindlini zethu. Kodwa ekhaya, ngokuvamile ama-orchid enza izimpande, futhi anikeze amahlumela amasha.
Ngakho-ke, kulesi sihloko sizocwaninga ngokuningiliziwe - indlela yokukhulisa i-orchid, ethengwe esitolo. Uma ungakwazi ukugcina imbali yakho, khona-ke ungakhula i-orchid kusuka kuma-bulb, noma ngisho nasezinhlwini.
Indlela yokukhulisa i-orchid:
I-orchid iyinhlangano ye-saprophytic. Ngenxa yokudla kwakhe, usebenzisa izinto eziphilayo, ezakhiwa ukubola kwezinye izinto eziphilayo. Ngakho-ke, izinsalela zezinto eziphilayo eziphilayo eziphilayo - izingcezu zamagxolo ephayini, ama-moss, noma ama-shavings enkuni - ziyanezelwa kwi-substrate.
Isibonelo se-substrate yama-orchid angaphandle komhlaba inhlanganisela yezingxenye ezimbili ze-pine bark, ingxenye eyodwa ye-peat ephezulu (ingxenye-ye-decomposed), ingxenye eyodwa yomquba ovuthiwe kanye nobumba obuncane. I-substrate enjalo izokuqukatha izakhi ezimbalwa, ibe nomoya omuhle wokuphelela, futhi ngeke ugcine amanzi amaningi. Ukuze uvimbele ukubola, inani elincane lamakiladi kufanele lengezwe enhlanganisweni yomhlabathi.
Ama-orchids akhetha ukukhula ezindaweni ezikhanyayo ezinomswakama ophezulu. Kodwa ababekezeli ukukhanya kwelanga eliqondile. Uma uchelela, udinga ukucabangela ukuthi i-substrate kufanele ivame ukuba yomile kumathinta. Ngaphambi kokuphuza ama-orchid amanzi abilisiwe kumele athandwe. Ama-orchids adinga ukuchelela okufanele. Ukuze wenze lokhu, ibhodlela elinembali lifakwa emanzini cishe imizuzu eyishumi, bese ususa ibhodlela emanzini ulinde ukuba ushiye imigodi yamanzi, bese ubeka khona ibhodlela ebhodweni lokuhlobisa.
Ukutshala ama-orchid kungcono ngenkathi efudumele, imifino ekhethekile eyinkimbinkimbi yama-orchid, izikhathi ezingu-1-2 ngenyanga. Kulesi simo, izimbali zesitshalo ziyoba lushisa kakhulu. Kodwa ngokweqile kwamanyolo, isitshalo sakho singakhula, futhi izimbali ngeke zibe khona.
Indlela yokukhulisa i-orchid evela ku-ampu
Ama-orchids, noma ama-pseudo-bulbs (bulbochki) angathengwa esitolo sezimbali. Uma i-orchid yakho ikhulile kakhulu, khona-ke kuleli cala ungahlukanisa i-rhizome, egcwele ama-pseudo-bulbs ezinxenyeni eziningana. Emgqeni owodwa, ama-pseudo-ama-2-3 asele, futhi aphinde afakwe embizeni entsha, noma e-disinfected.
Ukuze ungathwali ukutheleleka okwengeziwe, ummese kumele uqale ungenwe yi-disinfected, futhi izindawo zokusika zifafazwe ngelahle elichotshoziwe. Ukuze kusetshenziswe ukungcola, isisombululo esinamandla se-potassium permanganate singasetshenziswa .
Indlela yokukhulisa i-orchid evela kumbewu
Ngokuvamile noma ubani ukhetha ukuzimela ngokuzimela le mbali emangalisayo evela kumbewu. Abaningi bathi lokhu kungenzeka kuphela ezimweni ze-laboratory oyinyumba. Nanobe kunjalo, abalimi bembali be-amateur bafuna ulwazi oluthe xaxa lokuthi bangakhula kanjani i-orchid kusuka kumbewu.
Imbewu yama-orchid incane kakhulu, ingafaniswa ngisho nangothuli. Uma kuqhathaniswa imbewu ye-orchid enesitshalo sekolweni, ilahlekelwa izikhathi ezingu-15 000. Imbewu yama-orchid ayinayo i-endosperm, ngakho-ke ngesikhathi sokuhluma ingaba lula ukubhujiswa yizilwane ze-pathogenic.
Ngakho-ke, ukuze sihlolwe ngama-orchids, sidinga imishini ekhethekile, eyayihlolwe ngaphambili. Ngokuyinhloko, sidinga i-flask. Sizoyishintsha ngomuthi ovela ngaphansi kokudla komntwana. Ungabilisa izimbiza kuhhavini.
I-medium for nutrient for orchid kumele iqukathe zonke izinto ezidingekayo futhi kumele ibe yinyumba. Ukwakhiwa komphakathi wokudla okunomsoco kuyinkimbinkimbi kakhulu, kusekelwe ku-agar-agar, izinto eziphilayo nezimilayo. Ngakho-ke, kungcono ukuthenga ingxube eyenziwe ngomumo, yiphakamise ngokulandela imiyalo, bese ubilisa inamba yokupheka ukucindezela imizuzu engamashumi amabili. Ngalesi sikhathi, kubunjwa ubukhulu obufana ne-jelly, lapho ukuhlwanyela kuzokwenziwa khona.
Embizeni ngayinye kufanele kube ngu-20-30 ml. Ukuhlanganiswa. Ngemuva kokuhlwanyela imbewu, imbiza kumele ifakwe uphawu. Imbewu ye-orchid ikhula isikhathi eside, cishe izinyanga ezingu-9-10. Ukufakelwa isitshalo embizeni yembali kungenzeka kuphela ngemva kweminyaka engu-2-3. Futhi abaningi okufanele ulinde isikhathi lapho i-orchid yakho okokuqala izokujabulisa ngezimbali zayo.
I-Orchid iyimbali enhle kakhulu, kepha labo abazi kahle zonke izimfihlo zokuyikhathalela, i-orchid izojabulisa isikhathi eside futhi ikhula kahle, idale i-microclimate ekhethekile hhayi kuphela endlini, kodwa nasemndenini.
Sithemba ukuthi ukwaziswa okukulesi sihloko sikusizile, futhi ufunde indlela yokukhulisa i-orchid ekhaya.
Strawberry Crown: incazelo yezihlukahlukene, ukubuyekezwa
Izinhlobo ze-Blackberry. Izinhlobo ze-Blackberry ngaphandle kwamameva. Incazelo yezinhlobo ze-blackberry
Likuphi Orenburg: geography umlando emzini
Isithonjana "Soothe kwemihelo wami": Inani
Iyini i-MMM yabantu bethu?
Antioxidant - kuyini?
Ukuhlukaniswa kwezindlela zokucwaninga kwengqondo kusayensi yanamuhla